Banyere Anyị - Shenzhen JYMed Technology Co., Ltd
Mma peptide mma ndụ
Shenzhen JYMed Technology Co., Ltd bụ a elu-tech enterprise aku nnyocha na mmepe, n'ichepụta na commercialization nke peptides dabeere ngwaahịa tinyere n'ọrụ na-emepụta ọgwụ mgwa peptides, ịchọ mma peptides, na omenala peptides nakwa dị ka ọhụrụ peptide ọgwụ mmepe. JYMed nwere ihe abụọ Foto-ekesịpde enyemaka: Shenzhen JYBio Pharmaceutical Co., Ltd na Hubei JY Pharmaceutical Co., Ltd, nke bụ na-ewu.
JYMed si R & D center, emi odude ke Shenzhen, a guzobere maka nnyocha na mmepe nke ọgwụ ọhụrụ bekee, peptide APIs na mkpa ngwaahịa. The center na-onwem na oge a peptide synthesizer, nnukwu-ike preparative ọcha usoro, na mbara gbasara nyocha ngwá tinyere MS, HPLC, GC, UV, IC wdg The R & D center na-enyekwa technology support ma ọgwụ ọhụrụ chọpụtara na n'ichepụta usoro na-ebufe.
JYMed nwere anọ peptide API mmepụta e Nanjing dị na FDA cGMP nnabata, na abụọ okokụre dose ndu mmepụta edoghi nọ Shenzhen na ike inye azụmahịa batches nke peptide injectables obere ikike injectables ma kpụkọọ-Fikiere powder ngwaahịa n'okpuru cGMP ụkpụrụ nduzi. Na mgbakwunye, anyị na-na-ewu iri na isi na mmepụta edoghi maka peptide API na Xianning, Hubei n'ógbè, China, nke ga-abụ otu nke nnukwu peptide API n'ichepụta isi ke China.
JYMed nwere zuru ezu na oru oma peptide ụlọ ọrụ mmepụta usoro, nwere ike inye Comprehensive peptide ọrụ, tinyere CRO / CMO / CDMO / OEM na Regulatory omume support. Iji gị pụrụ ịdabere na, onwe na reactive soplaya gị peptides!
Key osise ndị JYMed
● 315 ọrụ mba
● 3 n'ichepụta ụlọ ọrụ
● APIs, Nanjing Lishui, Jiangsu, 4 mmepụta edoghi na nnabata na FDA
● APIs, Xian'ning, Hubei, 16 mmepụta edoghi na nnabata na FDA (ewu)
● Finished ngwaahịa, 2 onunu ogwu e Shenzhen Pingshan, GuangDong
● 7 ngwaahịa osụk ANDA ka CFDA, 5 ngwaahịa n'okpuru ịgba akwụkwọ
● 1 ngwaahịa osụk IND ka CFDA
● 1 ngwaahịa osụk VMF (US-FDA) na-enwetara CEP akwụkwọ